Nchịkọta Obodo ma ọ bụ Bochum Mba, olee nke ị ga-eji? | ECommerce ozi ọma
Nchịkọta Obodo ma ọ bụ Bochum Mba, olee nke ị ga-eji?
Họrọ ebe a ga-anabata gị weebụsaịtị ma ọ bụ Ecommerce Ọ dị ezigbo mkpa. Enwere ọtụtụ ihe ị ga-atụle, gụnyere ụgwọ, ntụkwasị obi, na ọsọ. Ikpebi n’etiti a Obodo Bochum na mba mba chọrọ nyocha zuru ezu.
Nchịkọta Obodo na mba mba
Nke mbu, ighotala na ndi obere ulo oru kwesiri itinye ego ha na ego, ya mere, ihe nlekota obula karia $ 10 kwa onwa. Ihe dị iche na usoro nke ego nke Bochum Mpaghara na Bochum mba ofesi ọ nwere ike ịdị iche iche.
O doro anya na mba nwere ụgwọ dị elu ma ọ bụ dị ala karịa ndị ọzọ, agbanyeghị n'ọtụtụ mba ndị mepere emepe n'ụzọ akụ na ụba, ego na-esighi ike karịa dollar, enwere ike ịchọta ndị na-eweta web hosting dị ọnụ ala. Ya mere, ọ bụ ihe ezi uche dị na ị nwere ike ịnweta a web mba atụmatụ dị ka mkpa gị ụlọ ọrụ na mba mba.
N'agbanyeghị nke a, ọ dị mkpa ịkpachara anya ma nyochaa nhọrọ niile. Ya mere, ọ dị mkpa ịme nyocha nke onye na-eweta ya, gụnyere ọrụ ya, ntụkwasị obi, yana ịchọ nkọwa nke ndị ọrụ ndị ọzọ gbasara nsogbu ndị nwere ike ime.
N'aka nke ọzọ, a Bochum dị ọnụ ala ma nwee ntụkwasị obi siri ike ịchọta. Ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịlele ọsọ ọsọ nke saịtị ahụ. Cheta na mgbe ibe weebụ na-ewe ogologo oge igosipụta, ọtụtụ mmadụ na-ahọrọ ịhapụ saịtị ahụ. Ha na-ejikwa echiche na-ezighi ezi nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ngwaahịa ahụ mee ya.
Na nke a ị ghaghi itinye ya mgbe inwetara a sava si mba ọzọ, enwere ike igbu oge n’ihi ozi a na-ezipụ site n’otu akụkụ ụwa gaa n’ọzọ. Ọ bụ ezie na oge a nwere ike ọ bụ ihe na-adịghị adị, nsogbu na Bochum International bụ na ọ nwere ike imetụta ọsọ ọsọ nke saịtị gị.
Na njedebe ọ ga-akacha mma ka ịhọrọ maka a Obodo Bochumkarịsịa nke tụkwasịrị obi na ọsọ ya ma ọ bụ enweghị enweghị ya agaghị emetụta ọrụ gị kwa ụbọchị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: ECommerce ozi ọma » eCommerce » mba » Nchịkọta Obodo ma ọ bụ Bochum Mba, olee nke ị ga-eji?
Igodo ndị bụ isi maka ihe ịga nke ọma nke StartUps
Shopp, WordPress ngwa mgbakwunye gị Ecommerce